उपचारको पैसा तिर्न नसकेपछि सिन्धुलीका युवा ८९ दिनदेखि अस्पतालमै बन्धक – Health Post Nepal
उपचारको पैसा तिर्न नसकेपछि सिन्धुलीका युवा ८९ दिनदेखि अस्पतालमै बन्धक
२०७७ जेठ ३० गते १९:३६
उपचारका क्रममा फागुन २० गते बल्खुस्थित राजधानी अस्पतालमा भर्ना भएका एक युवाले उपचारको पैसा तिर्न नसकेपछि झण्डै तीन महिनादेखि अस्पतालले बन्धक बनाएको छ।
आत्महत्याको प्रयास स्वारुप विष सेवन गरेका उनलाई परिवारले सो अस्पताल ल्याएसँगै निको भएर चैत २ गते डिस्चार्ज दिएको थियो। झण्डै २ साताको अस्पताल बसाईको उपचार खर्च झण्डै ७० हजार लागेको थियो। सो खर्चमध्ये ५० हजार नै परिवारले तिर्न नसकेपछि अस्पताल प्रशासनले डिस्चार्ज दिन नमानेको हो।
त्यसपछि अस्पतालले जानै नदिएका युवाको अहिलेसम्मको अस्पताल बसाईको बेडको खर्चमात्रै २ लाखभन्दा बढी पुगेको अस्पताल प्रशासनको दावी छ। पैसा तिर्न नसकेपछि अस्पताल प्रशासनले कुनै ग्यारेन्टी नदिएसम्म डिस्चार्ज नदिने भन्दै अस्पताल मै थुनेरै राखेको छ।
विष सेवनको घटनापछि परिवारले एबुलेन्समा रातरात काठमाडौं बल्खुस्थित राजधानी अस्पतालमा पु-याइयो। आइसियुमा राखेर अस्प्तालले उनको उपचार सुरु भएको थियो।
अस्पताल बसाईको क्रममा उपचारका क्रममा उनको झण्डै १ लाख खर्च भएको उनले दावी गरे। चरम गरिवी पिल्एिको परिवार तत्काल थप पैसा तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनले दावी गरे।
उनले हेल्थपोस्ट नेपालसँग टेलिफोनमा आफूले ५० हजार तिरेपछि फेरी अस्पतालले डिस्चार्जका समयमा ५० हजारको बिल थमाएको बताए। ‘थप पैसा पनि अस्वाभाविक खर्च देखिएको छ, तिर्न पनि सक्ने अवस्था छैन् भनेको थिएँ’ उनले भने, ‘तर उहाँहरुले जानै दिन्न भनेर थुनेर राख्नुभो’
दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि पैसा तिर्न नसकेर आफूलाई अस्पतालमै बन्दक बनाएर राखिएको पीडित गणेश परियार बताउँछन्।
‘मसँग तिर्नका लागि पैसा छैन। अस्पतालमा बस्दै गर्दा बिल बढेर दुई लाख कटिसकेको छ। अब के गर्ने? कसरी घर जाने? अब झनै म मरेतुल्य भएको छु’, उनले भने।
अस्पतालमा उनको साथमा अहिले श्रीमती बसेकी छिन्। ‘विहान–बेलुकी पेट पाल्नको लागि भरियाको काम गर्दै आएको थिए’, उनले हेल्थपोस्टसँग कुरागर्दै भने ।
गत मसिंरमा मात्रै परियारले बिवाह गरेका थिए।
पैसा तिर्न नसकेकाले क्यान्टिनले पनि खान दिन नमानिरहेको उनको दुखेसो छ। ‘सम्पतिको नाममा सिन्धुलीमा घर रहेको छ। अस्पतालले कुनै कागज डिस्चार्ज गरदिए कमाएर तिर्थे’, उनले भने।
‘अस्पतालले ५० हजार बाँकी हुँदै बाहिर निकालेको भए, मैले पैसा कमाएर तिर्थे’, उनले भने, उनले अस्पतालमै थुनेर राखेर आफूले बिल तिर्न नसक्ने भनेपछि प्रशासनले सुनुवाई नगरेको बताए।
कतै मिडियामा जानकारी दिए अस्पतालले जेलसम्म हाल्दिने धम्की दिँदै आएको उनको गुनासो छ। ‘मिडियामा समाचार आए १० मिनेटमा तलाई जेलमा लगेर हालिन्छु भनेको छन्’, परियारले भने, ‘न मर्नु न बाँच्नु भएको छ।’
अस्पताल प्रशासन भन्छ, ‘सबै पैसा नतिरे मिनाहा गर्न सकिँदैन।’
उपचार गरेर बिरामी ठिक भएको र पैसा नतिरेका कारण अस्पतालमा राखेको अस्पताल प्रशासन स्वीकार्छ।
दुई लाखभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी भएको अस्पतालका सिओ सरद अधिकारी बताउँछन्।
बिरामीले पैसा आउने विभिन्न वाहना बनाएर अस्पतालबाट भाग्नेसमेत कोषिस गर्दै आएको अधिकारीको भनाई छ।
‘कसैलाई भनेको भरमा बिरामीलाई छोड्न सकिदैँन’, अधिकारीले भने, ‘पाँच, दश हजार मिना गर्न सकिएला तर, यतिको पैसा छोड्न सक्ने अवस्था हु्ँदैन।’
विभिन्न समयमा पैसा वाहना पार्दै आएको उनले बताए। ‘जग्गाको लालपूर्जा ल्याए प्रहरी राखेर कागज गरेर पठाउछुँ। पछि तोकेबमोजिम पछि पैसा दिने सर्तमा छोड्ने अस्पतालले तयार रहेको थियो, उनले भने, ‘घरपरिवार पछि सम्पर्कमा आएन।’
दुई पटक अस्पतालबाट भाग्न कोसिस गरेको र हर्नेको लागि अर्को करुवा राख्नु परेको अधिकारी बताउँछन्।